Amabinzana angama-30 ababhali abakhulu ngentiyo | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Iincwadi, Inoveli
Usuku lukaValentine. Kodwa kukho imiphefumlo yotshaba engagungqiyo yeValentine elungileyo. Imiphefumlo engathanda ukuyibona ibekwe kwimela kunye nokucokiswa kwamaRoma kwelo xesha. Ewe, kukho iintliziyo ezibolileyo, ngaphezulu komnyama, babetha kwisingqisho senqala, ukukhathazeka kwentliziyo, impindezelo kunye nomsindo. Ngamafutshane, babetha nje odio. Kwaye babetha bonwabile kwaye banelisekile.
Kuba wonke umntu uyazi ukuba intiyo lutshaba olusondeleyo lothando kwaye ngokuchaseneyo. Ziyancedisana ngokutya njengoko zondla omnye komnye. Kwaye sinokubava ngamandla afanayo kunye nomnqweno. Bahambisa umhlaba ngokudibeneyo kwaye yiyo loo nto bezalise amaphepha kunye namaphepha amabali yinyani kwaye yaqanjwa. Ke namhlanje, kumasango omthendeleko wothando, masimeme umhlobo wakho osenyongweni. Siqokelela amabinzana aphefumlelweyo aba nobumba bakhulu.
Ngokuqinisekileyo sonke siyaliqonda elo qhina emathunjini, emqaleni nasentliziyweni xa sifunda la mazwi.
1. Intiyo lutyekelo lokusebenzisa onke amathuba ukuze wenzakalise abanye. IPlutarch
2. Intiyo evulelekileyo iswele ithuba lokuziphindezela. Seneca
3. Mabathiye lo gama besoyika; ULucio accio
4. Ndiyakuthanda ukungcatshwa, kodwa ndiyakucaphukela ukungcatsha. UJulius Caesar
5. Qaphela ukuba kungabikho mntu okuthiyileyo ngesizathu. UMarco Pontius Cato
6. Amadoda amaninzi ayamanyana ukwabelana ngenzondo enye kunothando olunye. Benavente Hyacinth
7. Wayesazi kakuhle ngentiyo, kuba lowo uzonda ngokuzimisela uyayazi indlela yokuqonda imvakalelo efanayo kwabanye kwaye uyazi ukuba angaxabisa njani xa ubutshaba buqinisekile kwaye bungenakuguqulwa. USantiago Posteguillo
8. Ndikuthandile kakhulu ukuba ndingakuthiyi. UJean-Baptiste Racine
9. Intiyo ngumsindo wabangenamandla. UAlphonse daudet
10. Xa intiyo yethu isiba nzulu, isibeka ezantsi kwabo sibathiyileyo. UFrançois de La Rochefoucauld
11. Inzondo linxila ngasemva kwethaveni, ehlaziya rhoqo unxano lwayo ngesiselo. UCharles baudelaire
12. Incinci intliziyo, kokukhona igcina intiyo.UVictor Hugo
13. Kwanele ukuba enye indoda ithiye enye ukuze intiyo ibaleke kulo lonke uluntu. UJean Paul Sartre
14. Musa ukumbeka ngentiyo yakho ongamzukisanga ngothando lwakho. UFriedrich Hebbel
15. Inzondo ayikho enye into ngaphandle kokucinga. UGraham Greene
16. Xa simthiyile umntu, sithiya ngokomfanekiselo wakhe into ethile engaphakathi kuthi. UHermann Hesse
Uthando nentiyo azimfama, koko zimfanyekiswe ngumlilo ongaphakathi kuzo. UFriedrich Nietzsche
Intiyo yimpambano yentliziyo; INkosi Byron
19. Intiyo yimpindezelo yegwala eyoyikiswayo. George Bernard Shaw
20. Ukukwazi ukuthiya nokuzondwa ungazani yenye yeenzuzo zeli hlabathi. UAlessandro manzini
21. Bambalwa abantu abakwazi ukonwaba ngaphandle kokumthiya omnye umntu, isizwe okanye isivumo sokholo. UBertrand Russell
22. Intiyo lelona khonkco linyanyekayo umntu anokunyanzela abanye ngalo. Ugo Foscolo
23 Ndikulungele ukulithanda ihlabathi, kodwa akukho mntu undivayo, ngoko ke ndafunda ukuthiya. UMnu Lermontov
24. UCatharsis. Impindezelo ecocekileyo. U-Aristotle wabhala ukuba umphefumlo womntu uhlanjululwa luloyiko nemfesane ebangelwa yintlekele. Kuyingcinga eyoyikisayo ukuba sizalisekise owona mnqweno unzulu womphefumlo ngentlekele yokuziphindezela, akunjalo? Jo Nesbø
Iintshutshiso, ithi, imbali yehlabathi igcwele ngabo. Ukuqhubela phambili kwentiyo phakathi kwezizwe. UJames joyce
26. Ukuba inyambalala inokuthanda ngaphandle kokwazi ukuba kutheni, inako nokuthiya ngaphandle kwesiseko. William Shakespeare
27. Ndiyakholelwa ukuba intiyo yimvakalelo enokubakho kuphela xa kungekho bonke ubukrelekrele. UTennessee uWilliam
28. Nayiphi na inkwenkwe yesikolo inokuthanda ngathi iphambene. Kodwa ukuthiya, mhlobo wam, ukuthiya bubugcisa. Ogden nash
29. Emva kothando, eyona nto imnandi yintiyo. UHenry kudala
30. Uthando oludibene nentiyo lunamandla ngaphezu kothando. Okanye loo ntiyo. UJoyce Carol Oates
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Amabinzana angama-30 ngababhali abakhulu malunga nenzondo
Ubaldo R. sitsho
Iyancomeka, ndingathanda ukuba nesakhono esingakanani sokucola ulwazi oluninzi kangangokuba ubomi bukuvuze. Ndiyakuvuyela
Phendula Ubaldo R
Ligama lombhali ………… .kodwa linokugqitha njengebinzana elilungileyo kwintiyo…. »Inzondo ngaphakathi komntu wonke ukufikelela….»